အဆိုပါမလိုချင်တဲ့ - အပိုင်း 19 | Apg29
အဆိုပါမလိုချင်တဲ့ - အပိုင်း 19
မိုက်ကယ်ကျောင်းမှာထူးခြားသောကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုသိတယ်ဘယ်တော့မှမ။ ငါဆရာသူတစ်ဦးရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ခက်ခဲကျောင်းသားဖြစ်စဉ်းစားနားလည်, ဤထက်ပိုမိုသည်သူ၏နောက်ခံသို့မဟုတ်သောသူမူကားတကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်မသိရပါဘူး။
ငါ၏အလူတန်းစားဆရာမရဲ့ပြီးနောက် ဆူ အထံတော်၌, ဒါကြောင့်သူကကာကွယ်ရေးအတွက်အမှန်တကယ်ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်အပြီးတစ်ကြိမ်, ကငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူအခြားကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူကကာကွယ်ရေး၌ငါ့ကို ယူ. သူတစ်ဦးချိုးစဉ်အတွင်းစာသင်ခန်းအပြင်ဘက်စင်္ကြံထဲမှာအနည်းငယ်အခြားသူတွေနှင့်အတူခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာထိုင်အဖြစ်သူ၏ဒူးဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွန်း။ ဒါကြင်ပြုမိပေမယ့်ကျွန်မနားမှာမိန်းမောတွေဝေရပ်နှင့်အဖွင့်မကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ဤအခြေအနေအကြောင်းပြောသောအရာကိုမသိခဲ့ပါ။ ငါသူသည်သင်တို့ခရစ်မာရ်နတ်မဖြစ်သင့်ဟုမှတ်မိနေပေမယ့်သင်ကသူ့ကိုကြင်ကြင်နာနာဖြစ်သင့်, ပြီးတော့သူကပဲမိမိအလေးချိန်၏ခုံတန်းရှည်ပေါ်မှာသူ့ကိုဆင်းတွန်းသည်သူ၏နောက်ကျောကသူ့နှစ်ခုဒူးထောကျထားလေ၏။
မိုက်ကယ်နှလုံးမှာဖြစ်ကောင်းအလွန်ကြင်နာလူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကောင်းနှလုံးဒါပေမယ့်အလွန်ဗရုတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့ရသည်။ သူကကျွန်မကိုကဲ့သို့တူညီသောကျောင်းကိုဘတ်စ်ကားထံသို့သွားလေ၏။ သူကကျွန်မနှစ်ခုမိုင် Ljungby သွားကြဖို့ Skeen အတွက်လယ်ယာမှာပေါ်တယ်ဘယ်မှာထက်အစောပိုင်းက Mil တစ်စုံတစ်ဦးအပေါ်အရှိန်မြှ။
ကျနော်တို့ကကြီးမား SJ ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူအိမ်ပြန်သွားသောအခါတစ်ခုမှာနေ့လယ်မိုက်ကယ်နဲ့သူ့ဟာအလွန်ရှုပ်ထွေး၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအော်ဟစ်, romped နှင့်ပွားစှာမှေးဖှားပြန်နှင့်ထွက်ပွေးဘတ်စ်ကားများ၏အတန်းမှာ၏ရုပ်သံလိုင်း left လုံးကိုအခြားကျောင်းသားများကသူတို့ထိုင်ခုံအတွက်တိတ်တဆိတ်ထိုင်နေစဉ်နှင့်ဘာမျှမပြောပါလျှောက်ဝံ့ကြ။ နှစ်ခုလူငယ်များအရှင်သူတို့က "ဘတ်စ်ကားကိုယူ" နှင့်သူတို့နှစ်သက်သည်အတိုင်းပြုပါနိုင်သောယုံကြည်ချက်အတွက်ဘတ်စ်ကားကျော်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာရဲ့သည်းခံခြင်းဟာမိနစ်အားဖြင့် ပို. ပို. ထွက်ပွေးမကြာမီက၎င်း၏ကန့်သတ်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနေချိန်မှာငါသည်ငါ့မှတ်တိုင်မှာချွတ်တယ်ရှေ့၌ငါဘတ်စ်ကားနှငျ့အတူကွှတစ်ခုလုံးကိုနှစ်ခုမိုင်, သူတို့အပေါ်ထားရှိမည်။
နက်ဖြန်နေ့၌မိုက်ကယ်ကျနော်တို့အတူတူပင်ခုံတန်းလျားပေါ်မှာထိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပယ်တယ်ပြီးနောက်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောဘာကောင်လေး, ဖိခဲ့ကြောင်း, ငါ့အဘို့ယုံကြည်မှု၌ငါ့ကိုသို့ပြောသည်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သူတို့ရပ်တန့်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းရှေ့တော်၌ထိုဘတ်စ်ကားနောက်ဆုံးတော့သူအမျက် ထွက်. ခါဒါကြောင့်အမျက်ထွက်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်မိက္ခေလနှင့်တစ်နေရာရာလမ်းပေါ်မှာသူ့မိတ်ဆွေများကပစ်ချခဲ့ကြောင်းမောင်းနှင်ခဲ့သောအဆိုပါဘတ်စ်ကားမောင်းသူ။
ငါသည်ဤအကြောင်းကိုဘာမျှကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ငါဘတ်စ်ကားမောင်းသူကသူဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာလုပ်ဖို့ပေမယ့်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးသိတယ်။ သငျသညျထိုအခြိနျမှာငါမအမြင်ခဲ့ကွောငျးသိရသငျ့သညျ။ ငါ Boo သို့မဟုတ် baa ဘူး, ကိုယ့်နားထောင်ပြီးငါတတျနိုငျသအကောင်းဆုံးအဖြစ်အမှုအရာကိုယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါကဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့မသိပေမယ့်ကိုယ့်ပြင်ပမှာရပ်နေရုံစောင့်ကြည့်ခဲ့မဆိုလမ်းထဲမှာကြီးတစ်ခုလေ့လာဆန်းစစ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါဒရာမာရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ဝံ့ခဲ့ပါဘူးသူကိုသာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နှင့်ရှက်တတ်ခြင်းနှင့်မလုံခြုံသောအနည်းငယ်သာလေ့လာသူ, နှောင့်အယှက်။
ဒါဟာအသေးစိတျမှကြွလာသောအခါအမှန်တကယ်ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်, ငါ့ဆရာအားဖြင့်မှာအော်သူအရပ်ရှည်ရှည် skranglige stökigeယောက်ျားလေးနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပျက်အဘယ်သို့ငါသိကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြေကွဲဖွယ်များနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတပြင်လုံးကိုကျောင်းကရှော့ခ်မယ်လို့နှင့်ကျောင်းသားများမကောင်းတဲ့ခံစားရမယ်လို့နှင့်သတင်းစာများအကြောင်းကိုရေးဖို့လိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ငါသည်ငါ့ဥစ္စာ၏အတန်းဖော်တစ်ဦးကသူအဖြစ်အပျက်တစ်ခုအစာအိမ်နာခဲ့ဟုဆိုသည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
မိုက်ကယ်နှင့်သူ့အမည်ရှိပက်ထရစ်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုသူတို့နေထိုင်တဲ့ရွာတညနပေိုငျးလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစကံကြမ္မာကိုညနေပိုင်းတွင်ထွက်ခဲ့ကြသည်သူနှစ်ဦးသို့မဟုတ်သုံးနဲ့အခြားလူငယ်များရင်ဆိုင်နေရသည်။ သူကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ခိုးယူခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းညဦးယံ၌ရှိခဲ့အဖြစ်သူတို့ထဲမှတစ်ဦးသူနှင့်အတူတစ်ကွင်းဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသဘောတူညီချက်၏အဆုံးမှာရန်ပုံငွေများပိတ်ထားတဲ့ကွင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ထိုလူငယ်မိုက်ကယ်နဲ့သူ့အဖော်တိုက်ခိုက်ခဲ့အခါ။ မိုက်ကယ်ဟာကွင်းဆက်ထဲမှာအကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ သူ့မိတ်ဆွေပက်ထရစ်ခေါင်းကိုကျော်လည်ပင်းပြေးကြ၏။ သူအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပေမယ့်မိုက်ကယ်ကွင်းဆက်၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာရိုက်နှက်သဖြင့်သေသတ်ခြင်းကိုအမှန်သွေးထွက်သံယိုစစ်တိုက်ကြ၏။
မိုက်ကယ်နဲ့ငါ့အစည်းအဝေးဒါမကောင်းမစတင်ငါနောက်ဆုံးအပိုင်း၌သင်တို့ကိုပြောသည်အဖြစ်, ထို့နောက်ငါသူ့ကိုမှာ nosebleed နှိပ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သူတို့သညျငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်သည့်အခါဟုတ်ကဲ့တောင်မှသူကတခြားသူတွေရဲ့ရှေ့မှာငါ့ကိုမကာကွယ်, မိတ်ဆွေများဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလေးစားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမိုက်ကယ်ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာကိုသူမိက္ခေလနှင့်သူ၏အဆွေခင်ပွန်းသည်အထဲကပစ်ချအဖြစ်သူခါဒါကြောင့်အမျက်ထွက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းကောင်းတစ်ဦးနှလုံးခဲ့ထင်ပါတယ်။
အပိုင်း 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19